Imisebenzi ye-CHAR kunye neCODE
01 ka 02
Excel CHAR / UNICHAR Umsebenzi
Faka iiMpawu kunye neMpawu nge-CHAR ne-UNICHAR Imisebenzi. © Ted French
Umgca ngamnye ukhonjiswe kwi-Excel ngokwenene nenani.
Iikhomputha zisebenza kuphela ngamanani. Iileta ze-alfabhethi kunye nezinye iimpawu ezikhethekileyo - ezifana ne-ampersand "&" okanye i-hashtag "#" - zigcinwa kwaye ziboniswa ngokunika inombolo eyahlukileyo nganye.
Ekuqaleni, akukho zonke iikhomputha zisebenzise inkqubo efanayo yokubala nenombolo yekhowudi xa ubala inani labalinganiswa.
Umzekelo, iMicrosoft yavelisa amaphepha ekhompyutheni ngokusekelwe kwinkqubo ye-ANSI ye-code - i-ANSI ifutshane kwi- American National Standards Institute - ngelixa iikhomputha ze-Macintosh zisetyenzisiweyo se- Macintosh .
Iingxaki zingaphuma xa uzama ukuguqula iikhowudi zomntu ukusuka kwinkqubo enye ukuya kwesinye esiphumela kwi-data.
I-Character Set Set
Ukulungisa le ngxaki isethi yomntu wonke eyaziwa njenge- Unicode inkqubo yenziwa ngasekupheleni kwee-1980 eyinika bonke abalinganiswa abasetyenziswayo kuzo zonke iinkqubo zeekhompyutheni.
Kukho iikhowudi zamanqaku ezahlukeneyo okanye iikhowudi zekhowudi kwikhasi lekhowudi le-ANSI ngelixa inkqubo ye-Unicode iklanyelwe ukuba ibambe ngaphezulu kweephupha zekhowudi ezigidi.
Ngenxa yokuhambelana, iikhowudi zokuqala ze-255 zeNkqubo ye-Unicode entsha inokufananisa ne-ANSI inkqubo yabalinganiswa beelwimi kunye neenombolo ezisentshona.
Kule mibhalo ephezulu, iikhowudi zicwangciswe kwikhompyutheni ukwenzela ukuba ukuthayibha ileta kwibhobhobhoyi kungenise ikhowudi yeleta kwiprogram esebenzayo.
Abalingani abangaqhelekanga kunye neempawu - ezifana nesimboli sephepha-copyright - © - okanye iimpawu ezibhalwe kwiilwimi ezahlukeneyo zingangeniswa kwinkqubo ngokuthayipha kwi-ANSI ikhowudi okanye inombolo ye-Unicode yomdlali kwindawo efunwayo.
Excel I-CHAR kunye neCODE Imisebenzi
I-Excel inemisebenzi emininzi esebenza ngala manani ngqo: i-CHAR kunye neCODE kuzo zonke iinguqu ze-Excel, kunye ne-UNICHAR kunye ne-UNICODE eyaziswa kwi-Excel 2013.
Imisebenzi ye-CHAR kunye ne-UNICHAR ibuyisela umlingiswa kwikhowudi enikeziweyo ngexesha imisebenzi yeCODE ne-UNICODE yenza okuchaseneyo-inika ikhowudi kwisimo esinikeziwe. Umzekelo, njengoko kuboniswe kumfanekiso ongentla,
isiphumo sokuba = i-CHAR (169) yiphawu lokubhaliweyo ©;
ngelixa umphumo we = CODE (©) u-169.
Ngokufanayo, ukuba imisebenzi emibili yayidityaniswe ndawonye ngendlela
= I-CODE (i-CHAR (169))
imveliso yefomyula iya kuba ngu-169, ekubeni imisebenzi emibini yenza umsebenzi ohlukile omnye.
Imisebenzi ye-CHAR / UNICHAR I-syntax kunye neeArguments
I- syntax yomsebenzi ibhekisela kwisakhiwo somsebenzi kwaye iquka igama lomsebenzi, amabakethi kunye neengxabano .
I-syntax yomsebenzi we-CHAR ngu:
= I-CHAR (Inombolo)
ngoxa i-syntax yomsebenzi we-UNICHAR yile:
= UNICHAR (Inani)
Inani - (elifunekayo) inombolo phakathi kwe-1 no-255 ecacisa ukuba yeyiphi impawu oyifunayo.
Inombolo yenkcazo inokungena kwinani ngqo kumsebenzi okanye iselferensi yeseli kwindawo yendawo kwiphepha lokusebenzela .
-Ukuba ingxabano yenani ayilona inani phakathi kwe-1 no-255, umsebenzi we-CHAR uza kubuya #VALUE! Ixabiso lesiphoso njengoko kuboniswe kumgca 4 kumfanekiso ongentla
Amanani ekhowudi angaphezu kwe-255, sebenzisa umsebenzi we-UNICHAR.
-ukuba ingxoxo ye-zero (0) ingenisiwe, imisebenzi ye-CHAR ne-UNICHAR iya kubuya i-#VALUE! Ixabiso lephutha njengoko kuboniswe kumgca 2 kumfanekiso ongentla
Ukufaka umsebenzi we-CHAR / UNICHAR
Izinketho zokungena kuyo nayiphi imisebenzi ziquka ukuthayipha umsebenzi ngomntu, njenge:
= CHAR (65) okanye = UNICHAR (A7)
okanye usebenzisa ibhokisi yencoko yenjongo yokufaka umsebenzi kunye neNkinobho yenombolo.
Amanyathelo alandelayo asetyenziswa ukufaka umsebenzi we-CHAR kwisisele B3 kumfanekiso ongentla:
Cofa kwifowuni B3 ukwenza i- cell esebenzayo -indawo apho iziphumo zomsebenzi ziboniswa khona
Cofa kwiTrafom ithebhu yemenyu yebhondi
Khetha umbhalo kwibhanethi ukuze uvule uluhlu lwehla lokuhla
Cofa kwi- CHAR kwoluhlu ukuzisa ibhokisi yencoko yencoko yomsebenzi
Kwibhokisi yencoko, nqakraza kumgca weNombolo
Cofa kwiseli A3 kwiphepha lokusebenzela ukuze ufake ifowuni yeefayile kwibhokisi yencoko
Cofa u-OK ukugqiba umsebenzi kwaye uvale ibhokisi yencoko
Uphawu lomatsalane - - kufuneka ibonakale kwiseli yeB3 kuba ikhowudi yomntu we-ANSI i-33
Xa ucofa kwi-cell E2 umsebenzi opheleleyo = I-CHAR (A3) ibonakala kwifom yefomula ngaphezulu kwephepha lokusebenzela
I-CHAR / UNICHAR Iindlela zokusebenza
Ukusetyenziswa kwemisebenzi ye-CHAR / UNICHAR kuya kuba kukuguqulela iinombolo zekhawudi zekhawudi kwiibalo kwiifayile ezidalwe kwezinye iindidi zeekhomputha.
Umzekelo, umsebenzi we-CHAR udla ukusetyenziswa ukususa iilwimi ezingafunekiyo ezibonakalayo nedatha engeniswe. Umsebenzi ungasetyenziswa ngokubambisana neminye imisebenzi ye-Excel efana ne-TRIM ne- SUBSTITUTE kwiifomula ezenzelwe ukususa ezi ziqulatho ezingafunekiyo kwiphepha lokusebenzela.
02 we 02
I-Excel CODE / UNICODE Umsebenzi
Fumana iikhowudi zeMpawu kunye neCODE kunye ne-UNICODE Imisebenzi. © Ted French
I-CODE / UNICODE Umsebenzi we-Syntax kunye neMigomo
I-syntax yomsebenzi ibhekisela kwisakhiwo somsebenzi kwaye iquka igama lomsebenzi, amabakethi kunye neengxabano.
I-syntax yomsebenzi weCODE yile:
= IKHODA (Umbhalo)
ngoxa i-syntax yomsebenzi we-UNICODE yile:
= UNICODE (Umbhalo)
Umbhalo - (ofunekayo) umgca ofuna ukufumana inombolo yekhowudi ye-ANSI.
Ikhonkco yombhalo ingaba ngumlinganisi omnye ojikelezwe ngamanqaku okucaphuna aphindwe kabini ("") angeniswa ngokuthe ngqo kumsebenzi okanye kwiseli yeselferensi kwindawo yomgca kwiphepha lokusebenzela njengoko kuboniswe kumqolo 4 no-9 kumfanekiso ongentla
Ukuba ingxoxo yombhalo ishiywe ingenanto umsebenzi weCODE uza kubuya #VALUE! Ixabiso lephutha njengoko kuboniswe kumgca 2 kumfanekiso ongentla.
Umsebenzi weCODE ubonisa kuphela ikhowudi yomgca kumntu omnye. Ukuba imbambano yombhalo iqulethe umlingiswa omnye - njengelizwi le- Excel eboniswe kumqolo 7 no-8 kumfanekiso ongentla - kuphela ikhowudi yomlingisi wokuqala uboniswa. Kule meko yile nombolo 69 eyona khowudi yomlinganiso wencwadi yesibini E.
Iimpapa kunye neeNcwadi ze-Lowercase
Iifowuni okanye iibrari ezinkulu kwibhodibhodi zinemikhodi eyahlukeneyo yamanani kuneezantsi okanye iincwadi ezincinci .
Umzekelo, inombolo yekhowudi ye-UNICODE / ANSI ye-"A" engama-65 ngelixa i-lowercase "ye" UNICODE / inombolo yekhowudi ye-ANSI i- 97 njengoko iboniswe kwimigqa 4 no-5 kumfanekiso ongentla.
Ukufaka iCODE / UNICODE Umsebenzi
= ICODE (65) okanye = UNICODE (A6)
okanye usebenzisa ibhokisi yencoko yenjongo yokufaka umsebenzi kunye neNgqinano yombhalo .
Amanyathelo alandelayo asetyenziswa ukufaka umsebenzi weCODE kwisisele B3 kumfanekiso ongentla:
Cofa kwifowuni B3 ukwenza i-cell esebenzayo-indawo apho iziphumo zomsebenzi ziboniswa khona
Cofa kwi- COD kwiluhlu ukukhupha ibhokisi yencoko yencoko yomsebenzi
Kwibhokisi yencoko, nqakraza kwi- Text line
Inombolo 64 ifanele ibonakale kwiselfayile B3 - le khowudi yomlingisi we-ampersand uhlamvu "&"
Xa ucofa kwiseli B3 umsebenzi opheleleyo = I-CODE (A3) ibonakala kwifom yefomula ngaphezu kwephepha lokusebenzela
Idatha yokubala edibanisa iCritical Criteria ne-Excel ye-COUNTIFS Umsebenzi
Yakha uphinde Ufake umgca weGrafa kwi-Excel kwiiNtshukumo ezi-5
Tshintsha iikholamu yemibala kunye ne-Show Percent Data Labels
Izikhokelo zeeNgcini - Izihlobo, ezingaqhelekanga kunye ezixubileyo
Sebenzisa umsebenzi we-Excel TRUNC ukuSusa iiNqununu ngaphandle kokuqhawula
I-Excel MODE.MULT Function
Indlela yokulinganisa ukuphambuka okuqhelekileyo nge-Excel ye-STDEV Umsebenzi
I-Google Spreadsheets 'I-RAND Umsebenzi: Ukuvelisa iiNombolo eziBhalisiweyo
Ukuqonda i-Index.html Page kwiwebhusayithi
EaseUS Todo Backup Simahla v10.6
Indlela yokwenza i-Internet Explorer Security
Internet kunye neNethiwekhi
Shintsha umyalezo womyalezo kwiMvelaphi yangasemva kwi-Mac OS X Imeyili
Iifaneli zisebenza njani
Ukuhlaziywa kwe-Stereo Receiver Review
Indlela yokufaka iifayile ze-Snapchat
I-Denon AVR-X1200W kunye ne-AVR-X2200W kwi-In-Command Receivers
Iikhowudi ze-HTML zoLwimi lweeLwimi zaseSpain
Iifayile ze-MP3 kunye nee-AAC zihluke njani, kunye nezinye iifayile zefayile ze-iPhone
World of Warcraft Intaba yeNtaba
I-Floppy Drive 4 Ikhonkco loMbane Umxhasi
Iisiseko zeeNkcukacha zeekhompyutheni - iMigangatho kunye neDivaysi yoMculo
I-Blu-ray ne-Blu-ray Players Guide
Ukuhlaziywa: Iingelosi zeMculo zeMengyue Mini Tube ehlanganisiweyo Amp
Iindlela ezi-5 zokukhawulisa umxholo kwiBlog yakho
Yiyiphi i-Byte kwi-Computer Networking?
Ndingasebenzisa I-Smartphone Yami Xa Ndiya Eya Kwezinye Izwe?
Izinto ezizaziyo malunga neNdleko yoqobo ye-iPhone
Uhlaselo lweDatha 3 Ukuphononongwa - Xa Kufuneka Ubuyise idatha ye-Mac yakho
I-Epson's Expression XP-830 I-Printer encinci ye-In-One
Ndingayisebenzisa njani iWindows usebenzisa i-Last Configown Good Configuration?